Isaphulelo se-EPS sokuloba amagwebu ukuvelisa kunye neFektri | Xiong Ewe
Umgangatho ophezulu-Wenziwe kumgangatho ophezulu we-EPS Foam ekungekho lula ukuyaphula okanye ukhubaze, ungasetyenziselwa ixesha elide, ungasetyenziselwa ukubambisa umsebenzi wentlanzi.
Imibala eKhanyayo-Intlanzi iyakuthanda kube lula ukutsala iintlanzi. Jonga unyango lomphezulu, ngaphandle kwento yokuhombisa ye-acrylic, sinepeyinti ekhanyayo, ipeyinti ecwebezeleyo kunye nepeyinti ebengezelayo.
Sebenza kakuhle-Uphendula kakhulu xa iintlanzi zithatha isithiyelo. Sebenza kakhulu ukuloba kwiimeko ezahlukeneyo kunye nobunzulu.
Ukuntywila emanzini yeyona ndlela ilungileyo yokutsala iintlanzi kwisithiyelo sakho xa ukubonakala kwamanzi kuphantsi. Ungazisebenzisa njengendawo ekubhekiswa kuyo ebonakalayo ukuze uhlale uyazi ukuba ikuphi i-bait yakho.
Zininzi iintlobo zeeflat zokuloba ezikhoyo. Uhlobo oludingayo luya kuxhomekeka apho uloba khona, ukuba luhlobo luni olubonakalayo emanzini, isantya somoya okhoyo ngoku, ubungakanani besithiyelo kunye nobunzulu bamanzi.
Kuya kufuneka ukuba ulinge ezinye ukuze ubone ukuba yeyiphi iflat eza kukusebenzela kakuhle. Unokukhetha kwiintlobo ezahlukeneyo, kubandakanya ukuntywila, iipali, iipopu (ezinokwenza ingxolo) kunye nokuntywila okwenziwe ngeqanda (ezinokuhamba ujikeleze amatye kunye nezinti). Ukukhetha idadesi elungileyo kungenza umahluko phakathi kosuku lokuloba olulungileyo kunye nokutsala okungabandakanyi konke konke.
Ezi zixhobo zeFoam zikulungele ukuloba i-surf ePompano kwaye zityiwa kulo lonke elaseFlorida xa zilotywa ezi ntlobo zifudukayo. Zisebenza kakhulu kwezinye iindlela ezininzi zokuloba xa ufuna ukongeza umbala kunye nokuhamba kwifreyim yakho yokuloba. Zifumaneka kwiipakethe ze-100 kunye ne-12 imibala eyahlukeneyo.
Ezinye iimilo kunye nobukhulu beeflat zokuloba amagwebu ziyafumaneka nazo, ukuba ziyafuneka, nceda usazise.
Egqithileyo Ibhokisi yegwebu ye-EPP
Okulandelayo: Ibhokisi yeCream Cream ye-EPS